Varun Dhawan Iyo Alia Bhatt Imisa Lacag Ah Ay Labadoodii Filim Ee Hore Boxoffice-ka Kasoo Xareeyeen - Hablaha Media Network
Varun Dhawan Iyo Alia Bhatt Imisa Lacag Ah Ay Labadoodii Filim Ee Hore Boxoffice-ka Kasoo Xareeyeen
HMN:- Labada guusha u saaxiibka ah Varun Dhawan iyo Alia Bhatt waxaa Jimcadaan tiyaatarada loo saari doonaa filimka la wada sugaayo Badrinath Ki Dulhania ee lagu kalsoon yahay inuu guul wacan gaari karo.
Hadaba Varun iyo Alia wada shaqeyntooda Badrinath Ki Dulhania kama bilaaban doonto ee labadan xidig horey ayay labo filim oo guulo wacan gaareen isla sameeyeen.
Varun Dhawan iyo Alia Bhatt Bollywo0d-ka waxay kusoo wada biireen sanadii 2012 ayagoo kusoo caan baxeen filimkoodii Student of The Year kaasi oo gudaha Hindiya kasoo xareeyay 62.94 Crore sidoo kalena natiijo ahaan Semi Hit noqday.
Waxaa u xigay in sanadii 2014 ay isla sameeyeen filimkii hirgalay Humpty Sharma Ki Dulhania wuxuuna Boxoffice-ka kasoo xareeyay 72.80 Crore asigoo noqday Hit.
Sidaa darteed wadar ahaan Varun Dhawan iyo Alia Bhatt waxay Boxoffice-ka kasoo xareeyeen 135.74 Crore wadar ahaan waxaana la filaa in filimkooda cusub Badrinath Ki Dulhania.
Rajada ay qabaan dadka arimaha Boxoffice-ka ka faaloodo ayaa ah in Badrinath Ki Dulhania sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso (First Weekend) uu keeni doono 45 Crore.
Waxaana xusid mudan labadii filim oo ay Alia iyo Varun isla jileen in lacagahaas aysan keenin sedexdooda maalmood ee ugu horeesay Student of The Year (25.60 Crore) halka Humpty Sharma Ki Dulhania (32.97 Crore) ay soo xareeyeen mid walbo sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay.
Waxaan leenahay nasiib wacan Varun Dhawan iyo Alia Bhatt madaama ay yihiin labo dhalinta Hindiya xiligaan hogaanka u hayaan guusha u saaxiib ah.